ကျနော်တို့ INSTAGRAM ကိုဗေဟမုတ် ED SPOTTING ဖန်တီးသောကျောင်းသားသုံးယောက်အားစကားပြောဆိုခဲ့သည် - သတင်း
ကျနော်တို့ Instagram ကိုဗေဟမုတ် Ed Spotting ဖန်တီးသောကျောင်းသားသုံးယောက်အားစကားပြောဆိုခဲ့သည်
လူတိုင်းတွင် doppelganger နှင့်ထူးဆန်းသောအိမ်ထောင်ဖက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်မတူညီသောအဆင့်တစ်ခုရှိသည်။
မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများဖြစ်သော George Wells၊ Rhys Jackson နှင့် Harrison Smith တို့သည် 'Carol' အမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြသည် Instagram အကောင့် Ed Spotting (@ed_spotting) သူတို့ကသူငယ်ချင်းနှင့်ကျောင်းသားချင်း Ed Hacking ၏ lookalikes များကိုတင်ထားသည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။
Ed Spotting သည်မတ်လကုန်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးယခုတွင်နောက်လိုက် ၃၅၆ ယောက်ရှိသည်။ ဂျော့ခ်ျက“ တစ်နေ့မှာအလီဂျီမှာအက်ဒကိုတွေ့ခဲ့တာ၊ ကံဆိုးစွာနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ရိုက်လိုက်တာနဲ့အဲဒီကနေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။
စံနှုန်းများလော။ ဂျော့ချ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်၊ သူက 'ဒီစံနှုန်းတွေဟာသန့်ရှင်းတဲ့သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုအဓိကထားတယ်။ ဖခင်၊ သားနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဆံပင်၊ မျက်မှန်နဲ့မုတ်ဆိတ်ပဲ။ '
မျှဝေသည် Edspotting 7:15 pm တွင် PDT မှာမတ်လ 31, 2019 ရက်တွင် (@ed_spotting)
ဒါ Ed ပါ။
မျှဝေသည် Edspotting 7:11 pm တွင် PDT မှာမတ်လ 31, 2019 ရက်တွင် (@ed_spotting)
၎င်းသည် Ed နှင့်တူသူများကိုရှာဖွေရန် Instagram အကောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ညနေခင်း ဒီမှာမင်းအတွက် doozy တစ်ခုရပြီ ဒီ Ed ကလူမှုရေးအရဆေးလိပ်သောက်တာ (လူသိများတဲ့ Ed ရို) ကိုတွေ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်ဤမေးကြည့်သူအစဉ်အဆက်သူတို့ skint နေသည့်အခါထိုသူငယ်အတွက်အဘို့အ Backy ထွက်ရသနည်း ငါသည်သင်တို့ကိုတရားသူကြီးဖြစ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
မျှဝေသည် Edspotting (@ed_spotting) :23ပြီ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ည ၁၁း၂၃ နာရီတွင် PDT တွင်ပြုလုပ်သည်
ဂျော့ခ်ျကဆက်ပြောသည် - 'ဒါက Ed ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ရှည်သောမှောင်မိုက်သောဆံပင်၊ သူကတကယ့် ale ကိုချစ်ပြီးညဥ့်နက်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါတဲ့သူလိုမျိုး Ed တစ်ယောက်ပဲ။
'' ယေဘုယျအားဖြင့်တော့သူတို့ကချောမောတဲ့ကောင်လေးတွေလိုပဲ။ ကျနော်တို့ကဆံပင်တိုတိုဒါမှမဟုတ်ပခုံးအရှည်ထက်ကျော်လွန်ပြီးတောင်မှတင်ပြမှုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့စကေး။ လူတိုင်းက Ed တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ထင်တယ်။
အစစ်အမှန် Ed သည်မတ်လတွင် Ed Spotting စတင်ပြီးကတည်းကသူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခံစားချက်ရောထွေးခဲ့သည်။
ဂျော့ခ်ျကပြောကြားခဲ့သည်မှာ '' အားလုံးရိုးသားမှုအရသူဟာအဲ့ဒါကိုသိပ်သဘောမကျဘူး။ သို့သော်ထို့နောက်သူက Old Lady Fame ၏ချိုမြိန်ချိုမြိန်ဖျော်ရည်ကိုလက်ခံရရှိစတင်ခဲ့သူလုံလောက်သောမရနိုင်ဘူး။ သူနဲ့ Ed Spotting တို့နှစ် ဦး စလုံးအတူတကွကြီးထွားလာတယ်လို့ငါထင်တယ်။ '
အိုမေမေ၊ ဒီနေ့မင်းအတွက်အားရစရာတစ်ခုရှိတယ် ဤစာမျက်နှာတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မရေမတွက်နိုင်သောတိုင်ကြားချက်များအပြီးတွင် Ed သည်သူ၏ဘဝကိုတစ်ချိန်ကအမှန်တကယ်ရယ်မောပြီးသူ၏ lookalikes များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ။ ။ ။ နှင်းလျှောစီးနေစဉ်ဤအလုပ်ကိုမျှဝေရန်နှင်းလျှောစီးနေစဉ်သူတို့၏အလုပ်များသောအချိန်ဇယားများမှအချိန်ယူရသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် @georgehjwells နှင့် @piershinton တို့၏ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ။ ။ ။ ။ #edspotting #keeplooking #watchout # Swedishavingalaugh
မျှဝေသည် Edspotting (@ed_spotting) PDT သည်201ပြီလ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ညနေ ၅း၅၇ အချိန်တွင်
Eds ၏အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းများစတင်သည့် အချိန်မှစ၍ သူသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းပြသခြင်းမရှိကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူက ၀ န်ခံခဲ့သည်။
'' ငါဟာအဆုံးစွန်သော Ed ကိုဘယ်တော့မှရွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုသို့အမြဲတမ်းတစ်ဝက်အဝတ်အချည်းစည်းပင်လယ်ဓားပြသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့သူတွေကိုပါပဲ။ ''
Skimmed ။ Semi-Skimmed ။ ရွှေထိပ် ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤစာမျက်နှာသည်မင်းတို့အမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းများအတွက်အမြဲတမ်းပြည့်ဝနေလိမ့်မည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော milkman နည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုနေ့စဉ်မပြတ်ကျွေးပါသည်။ ဒီနင်းနေသည့်ကောင်းသောနေရာအတွက် @anananananananand ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မျှဝေသည် Edspotting (@ed_spotting) :02ပြီလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ တွင်ည ၁၁း၀၀ နာရီညအချိန်တွင် PDT ၌ရှိသည်
ပရိသတ်များသည် Eds ကို Buenos Aires၊ Valencia, Gloucester, Dover ကူးတို့နှင့် Sainsbury's ရှိနို့အတန်းမှာတွေ့ရသည်။ ဂျော့ခ်ျ၏အဆိုအရလူ ဦး ရေ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် Ed ဖြစ်သည်။
သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာရာသီဥတု၊ အစစ်အမှန် ales များရရှိခြင်းနှင့် Linda McCartney ဝက်အူချောင်းစတော့များကဲ့သို့အချက်များပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သတ်မှတ်ထားသောအချင်းဝက်အတွင်း Eds သိပ်သည်းဆကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းနိုင်ရန်အတွက်သင်္ချာဆိုင်ရာ algorithm ကိုထုတ်လုပ်ရန်နာရီနှင့်ချီအလုပ်လုပ်သောအထူးအဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိသုတေသနမှသာလျှင်လူ ဦး ရေ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် Ed ဖြစ်သည်ဟုသာတိတိကျကျပြောနိုင်သည်
Ed သည်မည်သည့်နေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဂျော့ခ်ျက 'Eds သည်အလေ့အကျင့်၏သတ္တဝါများဖြစ်သည်။ သူတို့ကစောစောထနိုးတာ၊ စာကြည့်တိုက်ကိုရိုက်ပြီးအရက်မသောက်သောစက္ကူများကိုနင်းမိသည့်နေ့ကိုအဆုံးသတ်သည်။
ညနေခင်း shags, ယနေ့ကောင်းတစ် ဦး တယ်။ Valencia မှာပြောက် ဤသည် Ed ကပုံအမှန်တကယ်တဝက်အဖြစ်မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့သည် သူသည်အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် Pro သည်အမှန်တကယ် Ed နှင့်တူညီသောညာတောင်ပံအမြင်များကိုမျှဝေခဲ့သည်။ ။ ။ ။ ကျနော်တို့ယခုအချိန်အထိတင်ပြမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေအတွက်ကရှိခဲ့ပါတယ်! ဤဆိုးသောကောင်လေးအတွက် @ t.hadland ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဲဒါကိုဆက်လုပ်ပါ။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးသည်။ ထို့အပြင်တကယ့် Ed လည်းဖြစ်သည်။ #edspotting #rightwing #outmeansout #gammon
မျှဝေသည် Edspotting 10:53 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 10, 2019 ရက်တွင် (@ed_spotting)
အလားအလာကောင်းတဲ့ start-up တွေလိုပဲ Ed Spotting ဟာအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတယ်။
မကြာသေးမီက Ed သည်ကျွန်ုပ်တို့ဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်သတင်းများကိုဒုက္ခပေးနေသည်။
အရေးကြီးသောကြေငြာချက်။ ။ ။ မင်းသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်ဒ့်၏ခေတ်ဆန်းရက်သတ္တပတ်မှတစ်ဆင့်သင့်အားထိတ်လန့်ဖွယ်သတင်းများပို့ရန်ကြားဖြတ်။ ဤနေရာတွင်ပင်မရုံး၌ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ခါလိုက်ပြီးကလေးငယ်များသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်မသင့်တော်ပါ။ ။ ။ ဒါဟာကောလာဟလအဖြစ်စတင်ခဲ့ပေမယ့် Ed ကဆံပင်ညှပ်ခဲ့ဖူးကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအစောပိုင်းအဆင့်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စာနယ်ဇင်းရုံးသည် Ed Spotting ၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မထုတ်ပြန်သေးပါ။ သင်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးမှုသည်အသင်းအားလုံးအတွက်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီးအဖုံးအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေအလွဲသုံးစားမှုများကိုအများဆုံးတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အလေးထားပြောကြားလိုသည်။ ။ ။ #edspotting #uncertain # pray4ed
မျှဝေသည် Edspotting 11:16 pm တွင် PDT မှာမေလ 8, 2019 ရက်တွင် (@ed_spotting)
ဒါကြောင့် Ed Spotting ရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲ။ သင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်သော Eds ပမာဏကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါသင်ဘာလုပ်သနည်း။ သင်ဘယ်လိုနောက်ထပ်သွားလဲ? Carol သည် Eds အားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရန်အဆုံးစွန်သော Ed ကိုသရဖူဆောင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဂျော့ခ်ျကမှတ်ချက်ချသည်မှာ 'အကယ်၍ ဒီကိစ္စကိုရန်ပွဲတစ်ခုနဲ့သာလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ Ed ကချက်ချင်းလေ့ကျင့်ရေးစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်မက်ကတော့ Ed Spotting ပါတီကျင်းပဖို့ပဲ။ Ed နဲ့တူတဲ့လူတွေကပဲတက်ကြတယ်။ '
နောက်ဆုံးတော့ဒီမှာရှေးရှေးပါပဲ။ ဒါကလေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ပါဘူး တရားဝင် Ed Spotting ကုန်သွယ်မှုသည်ယခုအခါရောင်းနေပြီးဖြစ်သည်။ ။ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (@Freya marshall_) သည်ဤအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်နာရီနှင့်အမျှအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ဤနေရာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောတရားဝင်အရာရှိ Ed Spotting လက်လီရောင်းချသူများထံမှသာ ၀ ယ်ယူရန်သတိရပါ။ ။ ။ ကြိုတင်မှာယူမှုများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပွင့်လင်းသောလက်နက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ PayPal ကိုစောင့်နေရသည်။ ပေါင် (၁၀) မျှသာလျှင်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်သင်လိုချင်သည့်အရွယ်အစားရှိသည့် shit အဖုံးနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်မုတ်ဆိတ်များရှိနိုင်သည်။ ။ ။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှပ်အင်္ကျီများပုံနှိပ်ရန်အလုပ်လုပ်ရက်အချို့ပေးပါ။ ။ ။ PayPal:[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]။ ။ #edspotting #whositby #treschic
မျှဝေသည် Edspotting (@ed_spotting) မေလ ၁၂ ရက်၊
အကောင့်ကိုချွတ်ယူပြီးကတည်းက Ed Spotting လည်း Ed စီးပွားဖြစ်ပါပြီ။ Ed Spotting ၏ဂုဏ်သိက္ခာတိုးတက်စေရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Ed ပုံရိပ်များပါသည့်တီရှပ်များကိုယခုအပတ်မှကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။
SKUM ကုန်သွယ်ရေးအရာရှိ Freya Marshall သည် Ed ၏တီရှပ်ကို£ 10 ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဂျော့ချ်က '' ဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့မဝယ်နိုင်ဘူး၊ ဘယ်သူ့ကိုမှမတတ်နိုင်အောင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပေးရုံသာမကလူအများ ၀ တ်ဆင်တဲ့အခါအသိအမြင်မြင့်တက်လာမှာပါ။
မင်းက Ed လား သင်၏မိတ်ဆွေတ ဦး က Ed တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည် Ed တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါကသို့မဟုတ် Ed ဖြစ်ပါက၊ ဒီမှာ Carol မှတစ် ဦး ကိုယ်ပျောက်ဓာတ်ပုံကိုတင်ပါ ။ အကောင်းဆုံးတင်ဆက်မှုများနှင့်အတူ Ed ကိုယ်တိုင်၏ရံဖန်ရံခါဓါတ်ပုံများနှင့်အတူတင်ပါလိမ့်မည်။